INetflix sele ivumela ukhuphelo ukuba ludlale umxholo ngaphandle kweintanethi | Iindaba zeGajethi
Inkonzo yokukhuphela umxholo weNetflix sele isebenza, njengoko iqonga lomxholo lokusasaza lisandula ukubhengeza. Kubonakala ngathi yonke into ifika ngaphambi kwenyanga kaDisemba zonke ngaxeshanye kwaye kungaphelanga iveki siye sanazo iindaba ezimnandi ngokufika kwe-HBO eSpain kwaye ngoku sinazo ezi ndaba zimnandi kubasebenzisi be INetflix, ukhuphelo lomxholo ukuze ubukele ngaphandle kokuqhagamshelwa kunethiwekhi.
Le yinto eza kuza iluncedo kwiindawo apho ukugubungela kusezantsi okanye kungasebenzi, akukho nethiwekhi ye-Wi-Fi okanye izinto ezinje. Kananjalo kubo bonke abo bangenayo ireyithi yedatha enamandla kakhulu kwizixhobo zabo, ngokungathandabuzekiyo kwangaphambili okukhulu. Ibango labasebenzisi malunga noku sele livile kwaye ngoku ukhuphele umxholo weNetflix ukuyibukela ngaphandle kweintanethi ngoku kunokwenzeka.
Kodwa yonke into ayintle ngendlela ebesingathanda ngayo, ewe, kuya kufuneka ubone zonke iinkcukacha zale nkonzo intsha kwaye kuyacaca ukuba ayisiwo wonke umxholo weNetflix ofumanekayo ukuze ubukele ngaphandle kweintanethi. Ke kule bhetshi yokuqala sinothotho lwe-Narcos, iNdlu yeeCards, ii-Stranger Things, i-Black Mirror kunye neemovie ezininzi, kodwa lo mxholo uza kwanda ngokuhamba kwexesha. Ukuzikhuphela kufuneka siklikhe nje kwi icon ebonakala ecaleni kweqhosha lokudlala kwaye yile nto. Baye bongeza icandelo elitsha iyafumaneka ukhuphelo eyenza ukukhangela kube lula.
Ukuqala ukusebenzisa le intsha Into ekufuneka uyenzile kukuhlaziya usetyenziso Ngoko ke sifikelele kwisixhobo sethu kwaye kolu hlaziyo ukulungiswa kwezinye iimpazamo kuyongezwa. Olu hlaziyo sele lukhona kwiVenkile yeApple yeApple yezixhobo ze-iOS kunye ne-Android (kule meko kuyaphawulwa ukuba lo msebenzi awufumaneki kuzo zonke izixhobo). Ngayiphi na imeko sikushiya ikhonkco elingezantsi kwale migca ukukhuphela usetyenziso esele luhlaziyiwe.
Umthuthukisi: Netflix, Inc.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » INetflix sele ivumela ukhuphelo ukuba ludlale umxholo ngaphandle kweintanethi